उर्लाबारीका निशान टप टेनमा - Janapukar
उर्लाबारीका निशान टप टेनमा
उर्लाबारीका निशान टप टेनमा :-
गायन क्षेत्रमा चम्किलो तारा हुन्, निशान भट्टराई । यतिबेला उनी नेपाल आइडलको टप टेनमा परेका छन् । कम भोट पाउनेमध्येको सूची (डेन्जर जोन) मा पर्दै भएपनि निशान टप १० मा सुरक्षित भएका छन् ।
बाल्यावस्थादेखि गायनमा विशेष रुची राख्ने मोरङको उर्लाबारीका २१ बर्षीय निशान बीबीएस अध्ययनरत छन् । गजल र आधुनिक शैलीका गीत बढी मन पराउने निशानमा सबै खाले गीत गाउन सक्ने खुबी छ । बुबा नित्या नन्द भट्टराई र आमा रेनुका भट्टराईको कोखबाट कान्छो सुपुत्रको रुपमा वि.सं. २०५३ साल जेठ २९ गते मोरङको उर्लाबारीमा उनको जन्म भएको हो । उनको प्रारम्भिक शिक्षा उर्लाबारीकै भृकुटी मोडल एकेडेमीबाट सुरु भएको हो ।
सानैदेखि संगीतको पारखी भएकाले सोही विद्यालयबाट संगीतको पनि प्रारम्भिक शिक्षा गुरुहरू विशाल राई र लिला पौडेलबाट सुरु गरेका थिए । उनले उर्लाबारीको बिहानी कलाकेन्द्रमा पनि लामो समयसम्म गुरुहरू कमला खनाल र यशोदा शाक्यसँग संगीतको शिक्षा लिएका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालयको पढाई सकिएसँगै काठमाण्डौको शंकरदेव क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय पढ्दै हाल मुर्छना संगीत विद्यालयमा गुरु मनोजराज शिवासँग संगीत पनि सिकिरहेका छन् ।
निशानले नेपाल आइडलमा लगातार उत्कृष्ट प्रस्तुति दिइरहेका छन् । प्रत्येक बिहिबार बेलुका ८ः४५ बजे एपी वान टेलिभिजनमा प्रसारण हुने नेपाल आइडलको टप १० मा पुगेका निशानलाई जिताउन यतिबेला भोटको आवश्यक परेको छ ।
गायन प्रतिभाको खोजीका लागि बहुप्रतीक्षित मानिएको ‘नेपाल आइडल’को अडिसन २०७३ माघबाट सुरु भएको थियो । विश्वमै धेरै हेरिने टेलिभिजन फ्रेन्चाइज ‘आइडल’ को नेपाली संस्करणलाई एपी वान टेलिभिजनले प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस गायन प्रतियोगिताका लागि संगीतकार न्ह्यु बज्राचार्य, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र गायिका इन्दिरा जोशी निर्णायक रहेका छन् । सन् २००१ मा बेलायतका टेलिभिजन प्रोड्युसर साइमन फुलरले सुरु गरेको यो रियालिटी शो विश्वका विभिन्न मुलुकमा चर्चित छ ।
बेलायतमा पप आइडलका रूपमा परिचित यो सांगीतिक प्रतिस्पर्धा बाँकी देशमा सम्बन्धित देशको नामसँग आइडल जोडेर परिचित छ । अमेरिकी टेलिभिजन फक्स च्यानलले सन् २००२ बाट यो शोलाई अमेरिकन आइडलका रूपमा सञ्चालन गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा यसको चर्चा सुरु भएको हो । अमेरिका, अस्टे«लिया, अरब, इन्डोनेसिया, न्युजिल्यान्ड, ल्याटिन अमेरिका, पोल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान र भारतपछि फ्रेन्चाइज ‘आइडल’ को नेपाली संस्करण नेपाल आइडल सुरु भएको हो ।
निशानलाई जिताउनको लागि खयतभ गर्ने तरिका 07 type गरेर तेस्लाइ 35225 मा पठाइदिनुहोला । (बिहिबार राती12 देखि सुक्रबार दिउँसो6बजे सम्म) अबबाट यहाँहरुले एउटा मोबाइल बाट जति पनि Vote गर्न सक्नु हुनेछ । उर्लाबारीको शान भएकाले निशानलाई जिताउन अभियानै सञ्चालन गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका दलितलाई सिलाई मेसिन वितरण :- उर्लाबारीः दलित समन्वय नगर समिति उर्लाबारीले पाँच जना अपाङ्गता भएका दलितहरुलाई सिलाई मेसिन वितरण गरेको छ ।
उर्लाबारी–४ स्थित रामेश्वर शिवालय मन्दिरमा आयोजित स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान तथा सिलाई मेसिन वितरण कार्यक्रममा पाँच जना अपाङ्गता भएका दलितहरु तथा तिनका आश्रित परिवारलाई मेसिन वितरण गरिएको हो ।
उर्लाबारी नगरपालिकाको सहयोगमा प्राप्त सिलाई मेसिन उर्लाबारीका प्रेमकुमारी वर्देवा, विश्वेश्वरी विश्वकर्मा, हर्कमाया विश्वकर्मा, माया शंकर र दिलबहादुर दर्जीलाई वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागो, विशिष्ट अतिथि उपमेयर लक्ष्मी भण्डारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईले उनीहरुलाई सिलाई मेसिन प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित मेयर फागो, उपमेयर भण्डारीका साथै वडाध्यक्ष, सदस्यहरुलाई दलित समन्वय नगर समिति उर्लाबारीले सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरेको थियो । दलित समन्वय समिति उर्लाबारीका अध्यक्ष यमलाल रसाइलीको सभापतित्वमा भएको थियो ।
छोटो समयमै बिरामीको मन जित्दै गोदावरी हस्पिटल :-
उर्लाबारीः पूर्वी मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा अवस्थित गोदावरी हस्पिटल प्रा. लि. स्थापनाको छोटो समयमै बिरामीको मन जित्न सफल भएको छ ।
पूर्वी मोरङमा रहेका बग्रेल्ती अस्पतालको माझमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस हस्पिटलले नयाँ सोच र दृष्टिका साथ सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय, भरपर्दाे स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीको मन जित्न सफल भएको हो ।
सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठित र सामाजिक सेवामा समर्पित ब्यक्तित्व तथा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संलग्नतामा सञ्चालित हस्पिटलले नाफाभन्दा बढी सेवामा ध्यान पुर्याउँदै आएको छ ।
२०७० सालमा स्थापना भएको उक्त हस्पिटलले अन्य निजी अस्पतालभन्दा स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तर र सहुलियतका दृष्टिले फरक रूपमा रहेको छ । हस्पिटलले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको प्रयोग गरी ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरूबाट विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय र भरपर्दाे सेवा दिन थालेपछि हस्पिटलमा दैनिकजसो बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य मा पहँुच विकास गराउनका लागि गोदावरीले विभिन्न सेवाहरुमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
५ जना डाक्टरसहितको विशेषज्ञ डाक्टरहरुको टोलीले दैनिक बिरामीहरुको चेकजाँज गर्ने गरेका छन् । उक्त हस्पिटलले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरिब तथा असाह्यहरुको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न छुट तथा निःशुल्क उपचारको ब्यवस्थासमेत मिलाउँदै आएको छ । उक्त हस्पिटलले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत ५० भन्दा बढीको निःशुल्क उपचारसमेत गरिसकेको छ । गरिब तथा विपन्न समूदायको अपरेशन तथा औषधिमा पनि कुनै शुल्क नलिएको सञ्चालक प्रकाश चौहानले बताएका छन् । अत्याधिक र आधुनिक प्रविधि सम्पन्न उक्त हस्पिटलमा पूर्वी मोरङका साथै झापालगायत स्थानबाटसमेत उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
हस्पिटलमा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट दैनिक ओपिडी सेवा, २४ सैं घण्टा आकस्मिक सेवा, एनालाइजरसहितको ल्याव सेवा, डिजिटल एक्स रे सेवा, ईसिजी सेवा, हाड जोर्नी सम्बन्धि शल्यक्रिया, अन्तरंग सेवा, आधुनिक उपकरणहरूसहितको पोष्ट अपरेटिभ सेवा लगायत सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । १ करोडभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालित उक्त हस्पिटलमा १५ बेड रहेका छन् ।
निकट भबिष्यमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न आफ्नै भवन बनाउने, ल्याव कोली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्यको अवधारणाअनुरूप सर्वसाधारणले पनि धान्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको सञ्चालक रविन कार्कीको भनाई छ ।